डा. बाबुरामलाई जनता समाजवादी पार्टीको संघीय परिषद् अध्यक्ष बनाउने तयारी - तितोपाटी
डा. बाबुरामलाई जनता समाजवादी पार्टीको संघीय परिषद् अध्यक्ष बनाउने तयारी
जय नारायण माझी थारू – जनता समाजवादी पार्टीले डा. बाबुराम भट्टराईलाई संघीय परिषद् अध्यक्ष बनाउने तयारी गरेको छ । जसपा स्रोतका अनुसार भोलि र पर्सि दुई दिन चल्ने केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद् बैठकले भट्टराईलाई अध्यक्ष बनाउने तयारी गरेको हो । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहिसकेका भट्टराई अहिले जसपाका वरिष्ठ नेता छन् ।
हाल महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव जसपामा अध्यक्ष छन् । राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टीबीच एकीकरण हुँदा नै भट्टराईलाई अध्यक्ष बनाउने चर्चा थियो तर कार्यविभाजन पछि गर्ने गरी निर्वाचन आयोगमा दर्ता प्रक्रियाका लागि ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समिति बनाइएको थियो । भट्टराई निकट रहेका एक कार्यकारिणीसभा सदस्यले कार्यविभाजन टुंगो लगाउँदा अध्यक्ष बनाउने भद्र सहमति पार्टी एकीकरणकै बेलामा भएको बताए ।
जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणीसभाको बैठक भोलि र पर्सि तुल्सीलाल अमात्य प्रतिष्ठानमा बस्ने तय भएको छ । सो बैठकमा भट्टराईसहित राजपामा अध्यक्ष रहेका राजकिशोर यादव, महेन्द्र राय यादव, अनिल झालगायतको कार्यविभाजनबारे पनि छलफल गर्ने तयारी छ । पार्टी एकीकरणकै बेला कार्यविभाजन नगरिएको भन्दै केही समय यादव र झा निस्क्रिय थिए । अध्यक्ष ठाकुर र यादवले कार्यविभाजनका बेलामा भूमिका हेरफेर गर्ने प्रतिबद्धतापछि उनीहरु सक्रिय भएका थिए ।
के छन् त बैठकका एजेन्डा ?
बैठकका लागि विधान संशोधन, केन्द्रीय समिति र संघीय परिषद्को विस्तार तथा कार्यविभाजन, समायोजनलगायतको एजेन्डा तय भएको जसपा नेता केशव झाले जानकारी दिए । बैठक तुल्सीलाल अमात्य प्रतिष्ठानमा बस्नेछ । गत असार अन्तिम साता तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बीच एकता भएर जसपा निर्माण भएको थियो ।
केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव अध्यक्ष छन् । त्यस्तै, राजेन्द्र महतो, अशोककुमार झा, बाबुराम भट्टराई वरिष्ठ नेता छन् । अध्यक्ष दुई र वरिष्ठ नेता तीनबाहेक ५१ सदस्यीय कार्यकारिणीसभामा ४६ जना सदस्य छन् । कार्यकारिणीसभाको बैठकले केही समयअघि राजपा र जसपा मिलाएर बनाएको सात सयको केन्द्रीय समितिलाई अनुमोदन गर्ने तयारी छ ।
October 18, 2020 6:46 pm | Ads, ट्रेन्डिङ, नेपालको समाचार, विविध